Filtrer les éléments par date : samedi, 11 août 2018
samedi, 11 août 2018 22:09
Mahajanga: Olona 6 maty dobo an-dakana
Nitrangana loza an-dranomasina mahatsiravina indray taty Mahajanga io hariva io. Olona enina no namoy ny ainy vokatr'izany; zazakely ny telo ary renim-pianakaviana ny telo hafa. Tsy hita popoka kosa ny olona telo hafa, zaza ny roa ary lehilahy ny iray.
Avotra soaman-tsara ny mpandeha 11 hafa niaraka tamin'ity lakana dobo ity. 20 ny mpandeha tamin'ity lakana manana anarana hoe MAEVADIA ity, tsy fantatra mazava ny toerana niaingany satria tsy taty amin'ny sisin-dranomasin'i Mahajanga tampon-tanana. Hihazo an'i Soalala kosa Izy ireo, any amin'ny tanàna antsoina hoe Maroalika.
samedi, 11 août 2018 22:05
Sambava: Miparitaka sahady ny laza adina CEPE ?
Nanaitra ny Filohan’ny SEMPAMA Nosy Sambava, Christophe ny nahita laza adina “Opération” na Asa marika izay miparitaka omaly tolak’andro, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny Hotel Melrose Sambava izy.